रोमानिया कहाँ पर्छ, बाबु ? - Enepalese.com
रोमानिया कहाँ पर्छ, बाबु ?
नवराज पोखरेल ,रोमानिया २०७५ माघ १० गते ११:३३ मा प्रकाशित
ब्यस्तताको कारणले केहि दिनदेखि मेरो लेखाई कार्यमा अलिक विस्तार हुन् गएको छ। हुन् त, बिषयबस्तु नभएका होईनन, समय पो भएन। लेख्न नसके पनि बोल्नमा भने कम छुईन। हरेक दिन कम्तिमा पनि ५/७ जना बिदेशमा बस्ने नेपाली साथीहरुसंग फोनमा कुराकानी भई नै रहन्छ। केहि दिन अघि जर्मनीको बर्लिनमा बस्ने एक मित्रसंग भएको कुराकानीले यो सन्दर्भ बढाउने प्रेरणा मिलेको हो। कुरै कुरामा मैले उनलाई रोमानिया घुम्न आउने निम्तो गरें। अलिक अन्यौलमा पर्दै उनले मलाई सोधे – “रोमानिया त पोल्याण्डको नजिकै पर्छ हैन ? अनि तपाई राजधानी बुडापेष्ट मै बस्नुहुन्छ ?”
हालसालै ९३ बर्ष पुग्नु भएका मेरा बुबाले आज भन्दा झन्डै ३४ बर्ष अघि गर्नु भएको प्रश्नको सम्झना आयो। म रोमानिया आउने तयारीमा थिएँ। बुबाले मलाई सोध्नु भयो – “रोमानिया कहाँ पर्छ, बाबु? अमेरिकाको छेउमा हो?” मैले “अमेरिकाको छेउमा होईन बुबा, यो त झन्डै बेलायतको नजिकमा पर्छ” भनेर उहाँको चित्त बुझेको थिएँ।
यसै गरि यी मेरा जर्मनीमा बस्ने मित्रलाई कसरी बुझाउने ! पोल्याण्डको राजधानी बार्सादेखि रोमानियाको राजधानी बुखारेष्ट, २००० किलोमिटर टाढा छ भनेर। अर्को कुरा उनले सोचेका छन – बुडापेष्ट। उनले मात्रै होईन, अमेरिकी राष्ट्रपति विल क्लिन्टनले पनि उनको एक औपचारिक भ्रमणमा बुखारेष्टलाई बुडापेष्ट भनि सम्बोधन गरेका थिए। बुडापेष्ट शहर हंगेरीको राजधानी हो र बुखारेष्ट शहर रोमानियाको राजधानी हो। बुडापेष्ट र बुखारेष्ट बीच करिब १००० किलोमिटरको दुरी छ। रोमानिया र हंगेरी दुवै युरोप महादेशका पर्ने मुलुकहरु हुन् अनि युरोपियन युनियनका सदस्यहरू पनि हुन्। हंगेरीले सेन्जेनको सदस्यता पाएको छ, रोमानियाले छैन। दुवै देशमा आ-आफ्नै पैसा चल्छन। हंगेरीको पैसालाई ‘फोरिन्च’ र रोमानियाको पैसालाई ‘लेई’ भनिन्छ।
यति मात्रै होइन, धेरैले ‘युरोप’ र ‘युरोपियन युनियन’ का बारेमा फरक छुट्याउन सक्दैनन। युरोपमा ५१ मुलुकहरु छन भने युनियनमा मात्र २८ मुलुकहरु। किन युरोपमा ५१ देशहरु र युरोपियन युनियनमा २८ मात्रै? प्रश्न आएको छ।